ရိုမေးနီးယား - ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့ vs CFR အ Cluj | ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ | အခမဲ့ကစားနည်း
+7/ 9584-983-763ကိုယ့်nfo@soccerbet ကိုshoot ။coမီတာ
CFR အ Cluj vs ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်း
ရိုမေးနီးယား – ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့ vs CFR အ Cluj , အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များ -ဘောလုံးခန့်မှန်း
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: 14 သြဂုတ် 2017 | Posted: 11 သြဂုတ် 11:14 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 1154 ကြိမ်
ရိုမေးနီးယား – ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့ vs CFR အ Cluj
ရိုမေးနီးယား – CFR အ Cluj vs ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်း, ဘယ်သူမှ CFR အ Cluj ယားရဲ့ပထမဆုံးလိဂ်အတွက် 5th ပတ်ပတ်လည်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအရပ်ပေါ်မှာကြောင်း surprized ဖြစ်ပါတယ်. စာနယ်ဇင်းများတွင်နည်းပြများနှင့်လူတိုင်းကသူချန်ပီယံယူအားလုံးကိုအခြေအနေရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဖြစ်သူတို့ကဒန် Petrescu နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုး.
CFR အ Cluj ဒီနှစ်ကောင်းသောလွှဲပြောင်းအများကြီးလုပ်သူတို့အတူတူနေတဲ့တိုတောင်းသောအချိန်ပြီးနောက်တော်တော်ကောင်းကောင်းဆော့ကစား. နောက်ဆုံးညဥ့်သူတို့ပဲ Dinamo bucarest နှင့်အတူအနိုင်ရ(1-0) နှင့် Dinamo ပန်ကာအဖြစ်ဈ CFR အ Cluj လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ပိုကောင်းအဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းပြောပြနိုင်, သူတို့ကောင်းကောင်း deffend, အလွန်အန္တရာယ်များသည့်အခါတိုက်ခိုက်, သူတို့ middfielders ကြုံတွေ့ခဲ့ကြနှင့်၎င်း၏ခက်ခဲပထမဦးဆုံးလိဂ်များတွင်လွှမ်းမိုးဖို့. ဒါကကျနော်တို့သစ်ကိုရာထူးတိုးအဖွဲ့ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပြနိုင်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။. သူတို့ဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ် didn`t နှင့်နည်းပြသူ့အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်. လည်းရွှင်လန်းခြင်းမဟုတ်ပါ. ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းအဘို့အပြဿနာတွေအများကြီးဒီနှစ်သူတို့ဒီနှစ်ပထမဦးဆုံးလိဂ်၌တည်နေရန်ခက်ခဲစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်လိမ့်မယ်.
ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းအတွက်တနင်္လာနေ့များအတွက်ဒါ – CFR အ Cluj ဈအနိုင်ရဖို့ဧည့်သည်မဆိုပြဿနာများကိုတွေ့မြင် don`t, ပင်များက 2-3 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ခြားနားချက်. အကြှနျုပျ၏ခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည် 2-0 / 3-0. ဒီဂိမ်းကိုကစား I`ll2ရိုးရှင်းပြီး don`t ဘာမှအန္တာရာယ်. ကောင်းသောအသင်းများကို allways အားနည်းအသင်းများနှင့်အတူလှုံ့ဆော်ကြသည်မဟုတ်, ကိုယ့်ကစား don`t အဘယ်ကြောင့် Hacking ကို -1 မသန်မစွမ်း.
ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ | ဘောလုံးလောင်းကစားအကြံပေးချက်များ | အခမဲ့ကစားနည်း | အထူးဘောလုံးကစားပွဲဟောကိန်းများ
မကိန်း Grenland vs Fana2(ကျော်လွန် 3.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် @ 2.10)